MUUQAAL: Muuse Biixi si la yaab leh uga hadlay dagaalka Tukaraq ka Qarxay | Kalshaale
MUUQAAL: Muuse Biixi si la yaab leh uga hadlay dagaalka Tukaraq ka Qarxay
May 15, 2018 - 2 Aragtiyood
Hargeisa (Kalshaale) Madaxweynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa Si yaab leh uga hadlay dagaalka Tukaraq ee Puntland iyo Somaliland, Wuxuuna ku eedeeyay DF Soomaaliya dagaalka maanta ka dhacay degaanka Tukarraq ee Gobolka Sool.
Muuse Biixi ayaa intaas ku daray in 25 jeer weerar lagu soo qaadday Somaliland,waxaa uu sheegay in Ciidamada Somaliland ay guul ka gaareen dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka Tukarraq.
Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka saaka ka qarxay Tukaraq ayaa sheegaya in dagaalku uu iskiis u istaagay waxaana deegaanadaas ka da’ay roobab xoog leh.
Labadaan qabiil, waa Majeerteen iyo Isaaq dadka hogaamiya [iyo intooda badan shacabkooda] in eey munaafaqiin yahiin waxaad ku ogaan. Waagii eey Majeerteenka iyo Sacadka isku dagaaleen Kaalgacyo, amaba Galmudug iyo Puntland, waxeey Majeerteenka dadka hogaamiya iyo calool buur Abdiwali Gaas dhahayeen dowladda dhexe ayaa nasoo weerartay. Hadeer odaygaan Isaaqa hogaamiya Muuse Biixi waxuu dhahay dowladda dhexe ayaa nasoo weerartay.
Bal arka in eey dadkaan isku caqli yahiin oo munaafaqiin yahiin, oo isku gaal xun oo buuryaqab ah iyo carab xun oo khaniis ah eey kula taliyaan hadaladaas beenta iska cad ah.
Waa arrin wanaagsan hadii labadii qabiil ee jabhadahii ugu horeeyay dalka Somaliya kasameeyay iyaga oo doonayay maamul qabiil. Si dagdag ahna u dhistay maamulo qabiil kadib markii dowladii dhexe la riday. in eey isku jabaan waa arrin u dan ah Somalida guud ahaan, iyo dowladnimada Somaliya.